लकडाउन खुकुलो पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाऔँ
आकाश दुलाल सोमबार, जेठ १९, २०७७, ११:०७
२०७६ पौष १५ गते निमोनियाका बिरामीको सङ्ख्या वुहानमा एक्कासी बढ्दै गयो। त्यसको एक सातापछि नयाँ कोरोना भाइरस आएको पुष्टि भयो। आजका दिनसम्म ५० लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् र ३ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। संसारका लगभग सबै देशलाई यसले छोएको छ।
यस महामारीको उपचारका लागि विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन्। कम्तिमा पनि खोप बन्न नौ महिनादेखि २४ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले पहिलो चरणको सफलतापछि दोस्रो चरणमा परीक्षण सुरु भएको अवस्था छ। खोप नआउन्जेलसम्म यसलाई रोकथाम गर्ने एउटै विकल्प लकडाउन हो। चीनको वुहान सहरमा पनि लकडाउनकै कारण यो महामारी थप फैलिन पाएन र नियन्त्रण हुन सक्यो। धेरैजसो देशले लकडाउन नै गरेको पाइन्छ।
आजसम्म आइपुग्दा हामीले दुई महिनाको लकडाउन अवधि पार गरिसकेका छौँ। लकडाउनकै कारण भाइरस फैलिने क्रम तुलनात्मकरूपमा कम भएको हुनुपर्छ तर यसले अर्का तिर भने अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ। कोरोना भाइरसलाई हामी एउटा आइसवर्गका रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा देख्दा एक भाग सानो देखिन्छ तर नदेखिने भागले धेरै प्रभाव पार्दछ। यस महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभएर आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा धेरैनै असर पुर्‍याएको छ।
देशले आज कहिल्यै कल्पना नगरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेको छ। साना तथा मझौला उद्योगदेखि लिएर ठूला उद्योगका साथै होटल व्यवसाय सबै ठप्प छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा यसको असर लगानीकर्ता, मजदूर, तिनका परिवार, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत उत्पादन र बजारीकरणमा पर्छ।
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योग चार लाख अठार हजार छन् भने ठूला उद्योग सात हजार आठ सय छन्। यिनले ३० लाख रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। उद्योग र व्यवसायले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। यि कल–कारखानाहरूमा बैंकको करिब ३२ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी छ।
त्यसैगरी विकास–निर्माणमा २० लाखले रोजगारी पाएका छन् भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ७.५ प्रतिशत योगदान यस क्षेत्रको छ। करिब ८ हजारको सङ्ख्यामा होटल रहेका हुनाले यस व्यवसायसँग ८ लाखभन्दा बढी रोजगारी जोडिएका छन्। प्रतिवर्ष नेपालमा नयाँ जनशक्ति करिब ५ लाख १२ हजार तयार हुने तथ्यांकले देखाउँछ भने एकलाखले मात्र रोजगारी पाउने गर्छन्। अझ अहिलेको विषम स्थितिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले विदेश वा छिमेकबाट स्वदेश फर्कन रुचाएको देखिन्छ।
लकडाउन लम्बिँदै गयो भने धेरैले रोजगारी गुमाउनेछन्, जसका कारण जीवनयापन थप कष्टकर हुन पुग्ने निश्चित छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस जीवनभर नै रहन सक्ने आशंका गरेको छ। यो आशंका सत्य भयो भने हामीले कोरोना भाइरससँगै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। यस्तो भएको खण्डमा हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाएर संक्रमणका कारण हुने सम्भावित मृत्युबाट बच्नुपर्छ भने यसलाई एचआइभी एड्स जस्तै सामान्य मानेर हिँड्नुको विकल्प हुँदैन।
नेपालमा हालसम्म ८५ प्रतिशत उद्योग र व्यवसायको नाफा घटिसकेको पाइन्छ भने १२ लाखले भन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। साना तथा घरेलु उद्योगले घरभाडा,कामदारको तलबका साथै ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। रेमिट्यान्समा २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभाव परेको देखिन्छ। उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुँदा धेरै रोजगारी जोखिममा परेका छन्। रोजगारीका लागि पहिलो गन्तव्यमा पर्ने खाडी मुलुक तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण आर्थिक मन्दीमा जान सक्ने अनुमान छ। त्यहाँ रहेका नेपालीको रोजगारीमा यसबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।
अब यो लकडाउन कति समयसम्म लम्ब्याउने? खोल्दा कति चरणमा खोल्ने? आजका धेरै मानिसको मनमा यही प्रश्न उब्जेको छ। यदि लकडाउन लम्बिँदै गयो भने धेरैले रोजगारी गुमाउनेछन्, जसका कारण जीवनयापन थप कष्टकर हुन पुग्ने निश्चित छ।
छिमेकी मुलुक भारत, जससँग हाम्रो संस्कृति, जीवनशैली, रीतिरिवाजलगायत खाद्य प्रणाली पनि मिल्छन्। त्यहाँ कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेमा ६० देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका ४२ प्रतिशत छन्, ४५ देखि ६० वर्ष उमेरसमूहका ३४ प्रतिशत छन्, तीमध्ये पनि मधुमेह, हृदयविकार र मिर्गौलाको खराबीका कारण मृत्यु हुने ७८ प्रतिशत रहेका छन्।
नेपालको तथ्यांकअनुसार ७१.५ प्रतिशत अर्थात् दुई करोडभन्दा बढी जनसंख्या काम गर्ने वर्गमा पर्दछ भने युवा जनशक्ति (१७–४५वर्ष) ५७ प्रतिशत छन्। यस्तो युवा जनशक्ति भएको देशले उचित योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने त्यति धेरै त्रास लिनुपर्ने देखिन्न। अहिलेको परिस्थितिमा भाइरसका कारण प्रभावित धेरै देशले लकडाउन खोल्दै व्यवसाय सहज बनाउँदै आएका छन्। स्पेन, जर्मनजस्ता देशमा रेष्टुराँ, बारलगायत पार्क सञ्चालनमा आइसकेका छन्। भारतमा भने क्रमिकरूपमा सुरक्षा अपनाएर लकडाउनलाई सहज बनाउने क्रम जारी छ। यसको मतलब हाम्रो देशमा पनि सबै कुरा खोल्नुपर्छ भन्ने होइन तर जीवन सहजबनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला चाँहि आइसकेको छ भनेर सचेत गराउनु हो।
लकडाउन लम्ब्याउँदै जाँदा भाइरसले नभई भोकमरीले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्नेछ। त्यसबाट विद्रोह पनि जन्मन सक्छ।
साधारण मानिसहरूलाई रोजगारी गुमाउने डर एकातिर छ भने अर्कातिर लकडाउनका कारण डिप्रेसन र तनावले गाँज्न सक्ने देखिन्छ। आफूले चाहेको मान्छे वा साथीसँग आफ्ना कुरा राख्नन पाउँदा र सामाजिक सञ्जालले फैलाएको त्रासले गर्दा मनोरोगीको संख्या नबढ्ला भन्न सकिन्न। यसबाट मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने र रचनात्मकतामा ह्रास निम्तिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने निम्नवर्गीय परिवारको जीवन अहिले नै ज्यादै कष्टकर बनिसकेको छ भने यसैगरी लकडाउनलाई लम्ब्याउँदै जाँदा भाइरसले नभई भोकमरीले ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन अवश्य बढ्नेछ। त्यसबाट विद्रोह पनि जन्मन सक्छ र यसको प्रमुख जिम्मेवार सरकार हुनेछ।
व्यक्तिगत रूपमा जर्मनी, स्पेन, इटली र भारतजस्ता देशहरूले गरेको निर्णयलाई म एउटा बौद्धिक निर्णय ठान्दछु। आज यस महामारीले प्रत्यक्षरूपमा ५० लाखलाई असर गरेको होला तर अप्रत्यक्षरूपमा करोडौँको जीवनलाई तहसनहस पारिदिएको छ। यसकै कारण आगामी दिनमा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पुग्ने असरका कारण बाँच्न गाह्रो हुने देखिन्छ। त्यसकारण नेपालमा पनि अब लकडाउनलाई सहज बनाउँदै लानुपर्छ र अर्थतन्त्रसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रलाई सुचारु गराउँदै दैनिक मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने जनशक्तिको जीवन सहज बनाउनुपर्छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍यायाउने औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय आदि क्षेत्रको भविष्यमा सुधार हुन जान्छ भने भोकमरीले निम्त्याउने भयावह परिस्थितिलाई रोक्न सकिन्छ।